Teori Pärm 3
Waa maxay macnaha calaamadahan wadada?
tirada haadadka/seedadka ayaa soo yaraanaya 400 oo mitir kadib
baabuurta ku socda haadka/seedka bidix waxay haystaan waajibaadka ka leexashada ee baabuurta haadka/seedka midig 400 oo mitir ka dib
lama oggola in la is dhaafo, maadaama wadadu mar dhaw soo yaraan doonto
baabuurta ku socda haadka/seedka midig waxay haystaan waajibaadka ka leexashada ee baabuurta haadka/seedka bidix 400 oo mitir ka dib
Waxaad ku wadaa wado baadiye oo toos ah, waxaadna u leexan doontaa bidix. Kee baa ka mid ah gaadidyada kaa hor imaanaya ee ugu adag inaad qiyaastid xawaaruu ku soconayo?
gaadhi shakhsiyeed jiidaya aqalka yar ee lugaha leh ee baabuurta lagu jiito.
Sidee u yarayn kartaa isticmaalka shidaalka ee gaarigaaga?
waxaan ku darayaa shidaalka maadada karburatorsprit xilliga qaboobaha
Waxaan ku wadaya aariyada/hawada taayirka oo hoosaysa
Waxaan iska daminayaa hawada (eesiiga) markaan loo baahnayn
Meeqa ayaa laga rabaan ugu yaraan masaafada u dhaxaysa xariiqda taagan ee dhexe iyo gaadiidka si aad u istaagi kartid sida gaadhigan masawirka ku sawiran?
Waxaad ku wadaa wado hal jiho leh (enkelriktad gata), oo waxaa meel hore kaaga soo baxday calaamdaan. Waa maxay calaamadda macnaheedu?
Babuurta iga hor timaada waxaa saaran waajibaadka ka leexashad oo waa inay iga istaagaan
Digniin la isaga digayo gaadiid aad isgoynaysaan
Waxaa i saaran waajibaadka ka leexashada baabuurta iga hor timaada
Wadadu mar dhaw ayay soo dhuubanaysaa
Waxaa mar dhaw dhici kartaa in baabuur iga hor timaado
Maxay tilmaamaysaa calaamadan/astaantan boolisku?
Waan istaagayaa, baabuurta iga hor imaanaysana way wadi karaan
Waan wadi karaa, baabuurta iga hor imaanaysana way istaagayaan
Waxaan dhimayaa xawliga/xawaraha
Aniga iyo baabuurta iga hor imaanaysaba waa inaan istaagno
Waxaad ku sii socon doontaa tooska horay, Sidee yeelaysaa xaaladaan si aad u yaraysid qiiqa qashin-saarka ee gaariga inta igu yar ee suurtagal ah?
Waxaan isticmaalayaa bareega matoorka, oo waxaan isku dayayaa inaan ka fursado/maarmo inaan joogsado
Waxaan cagta ku riixayaa keleeshka oo kusii dilindiloonayaa xagga ishaarada
Waan wadaya illaa aan ka gaarayo ishaarada / laydhka gawaarida kala haga kadibna waan joogsanayaa ama istaagayaa
Waxaad ku wadaa 70 km/tim wado baadiye ah. taayarada gaariga ee dhinaca midig ayaa waxay ka dageen laamiga qarkiisa. Maxaa habboon inaad samayso?
Xoog ayaan bareega u qanbanayaa, oo si taxadar leh ugu soo leexinayaa dhinaca waddada laamiga
Si fudud ama dabacsan ayaan biriigga u qabanayaa, oo isteerinka xoog u jarayaa si aan dhakhso ugu soo laabto waddada laamiga
Xawligayga ama xawaarahayga ayaan haysanayaa oo si degan oo taxadar leh ugu soo leexinayaa waddada laamiga
Waxaan daynayaa leewarka ama sheelaraha, oo si taxadar leh ugu soo leexinayaa xagga wadada laamiga
Qof aragga ka naafo ah (indhoole) oo isticmaalayaa ul cad ayaa wuxuu taagan yahay marashiibiyoodiga. Wuxuu usha usoo taagayaa hortiisa. Maxaa la rabaa inaad diyaar u ahaatid inuu indhooluhu samayn karo?
Wadada inuu gooyo
Qof inuu caawimaad waydiisto
Inuu dhinaca kale u jeesto oo dib u laabto
Inuu taagnaado oo ii daayo inaan ka hor maro
Waxaad u socotaa bidix. Ma laga yaabaa isla markaasba in baabuurta kaa hor imaanaysa uu taagan yahay laydh cagaaran mid ka mid xaaladahan?
laakiin, laakiin xaaladda A oo kaliya
haa, labada xaaladoodba
laakiin, laakiin xaaladda B oo kaliya
Xaaladee ayay ugu badan tahay halista ah inay shil galaan dhalinyaradu?
markuu raadyuhu u daaran yahay oo codkiisuna sareeyo
Marka ay dhilinyaro rakaab ah haystaan/ wataan.
Markay kaligood gaariga ku yihiin
Ma soo yarayn kartaa wakhtiga uu ku kululaado sifeeyaha qiiqa marka aad gaariga shidaysid ama daaraysid maalin qabaw jiro oo sidaas aad ku yaraysid qiiqa qashin-saarka?
Maya, lama soo gaabin karo wakhtiga
haa, inaan matoorka wareegiisa kordhiyo illaa iyo 3000 v/min daqiiqado ka hor intaanan dhaqaaqin
haa, inaan matoorka u daayo inuu daarnaado dhawr daqiiqo ka hor intaanan dhaqaaqin
Haa, inaan adeegsado/isticmaalo matoor kululeeye
Sifooyinkan tee baa ka mid ah oo go'aamisa inuu darawalku yahay mid ka taxadaraya shilalka?
Awood-falcelin oo degdeg ah
Aqoon fiican oo xagga shuruucda wadada ah
Fahansan in badan khataraha
Waxaad u leexanaysaa dhinaca bidix, qofka lugaynaya waxa uu ku soo socdaa oo uu qoyn doonaa wadadaada waxaana u shidan laydh cagaaran islamarka adiguba aad cagaar haysatid. Maxaa sax ah?
Waa inaan qof lugaynayaa ka istaago xitaa hadii aysan weli soo gaarin wadada
Uma baahni inaan ka istaago qofka lugaynaya maadaama ay tahay inay istaagto meesha u dhaxaysa labada wado.
Lama oggola inaan istaago isgoyska anigoo cagaar haysta
Maxaa haboon inaad samaysid markaad usoo dhawaatid calaamadaan wadada?
xawaarahaaga ku soco oo araggana ku aadi meel u dhaw gaariga in ka badan sida caadiga ah
Xawaaraha/Xawliga yaree oo aragga u badi hareeraha/dhinacyada wadada in ka badan sida caadiga ah
Xawaarahaaga ku soco oo araggana ku aadi meel hore oo wadada ah in ka badan sida caadiga ah